ဒါရိုက်တာ Steven Spielberg ရိုက်ကူးထားသမျှ အကောင်းဆုံးဇာတ်ကား (၉) ကား
7 Jul 2018 . 4:28 PM
ရုပ်ရှင်လေးများ ကြည့်လို့ ရုပ်ရှင်ပါးဝလာပြီဆိုရင် မင်းသား မင်းသမီးရွေးရုံတင်မဟုတ်ဘဲ ဒါရိုက်တာကိုပါ ရွေးချယ်လာကြပါပြီ။ ဒါရိုက်တာ Steven Spielberg ဆိုရင်တော့ ဒီဇာတ်ကားဟာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတစ်ကား၊ ကြည့်ရမယ့် ဇာတ်ကားလို့ စိတ်ထဲ ချက်ချင်းကြည့်ချင်သွားတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ Steven Spielberg ရဲ့ အရည်အချင်းဟာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားကို စိတ်ခံစားချက်ရော၊ ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုရော ခံစားရအောင် ရိုက်တတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူရိုက်သမျှ ဇာတ်ကားတွေထဲက အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကား(၁၀) ကားကို ညွှန်းဆိုဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
၉) Minority Report (2002)
နာမည်ကျော်မင်းသား Tom Cruise ပါဝင်ထားတဲ့ ဒီ Sci-fi ဇာတ်ကားဟာ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ၂၀၀၂ ခုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားတွေထဲက တစ်ခုလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
၈) A.I Artificial Intelligence (2001)
ဒီဇာတ်ကားကတော့ Spielberg ရဲ့ ရုပ်ရှင်သက်တမ်းတလျှောက် စိန်ခေါ်မှုအရှိဆုံးဇာတ်ကားတွေထဲက တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ သူ့သူငယ်ချင်း ဒါရိုက်တာ Stanley Kubrick ဆီက ဒီဇာတ်ကားကို လက်လွှဲပြောင်းယူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အခါမှာလည်း ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၂၃၅.၉ သန်းနဲ့ ဝင်ငွေကောင်းသလို အကယ်ဒမီဆု ၂ဆုအတွက် ဆန်ကာတင်စာရင်းဝင်တဲ့အထိလည်း အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
၇) Lincoln (2012)
ဒီဇာတ်ကားတော့ သမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေနွယ်ပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒရာမာဇာတ်ကား အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Daniel Day-Lewis က သမ္မတကြီး လင်ကွန်းနေရာက သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ သမ္မတကြီးလင်ကွန်းမသေဆုံးခင် နောက်ဆုံး ၂လမှာ လင်ကွန်းကြုံရတဲ့ အခက်အခဲနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရပုံတွေကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာ အကယ်ဒမီ ၁၂ ဆုအတွက် ဆန်ကာတင်စာရင်းဝင်ခဲ့ပြီး Best Production Design နဲ့ Day-Lewis ကလည်း အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ဆုရပါတယ်။
၆) Empire of the Sun (1987)
ဒီဇာတ်ကားကတော့ Steven Spielberg ရိုက်ကူးသမျှဇာတ်ကားထဲမှာ Box Office ဝင်ငွေနည်းတဲ့ ဇာတ်ကားထဲမှာ ပါပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက အကျဉ်းကျခံရတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အတွေ့အကြုံကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားဟာ တကယ့်ကို အင်အားကောင်းပြီး ညှို့ယူဖမ်းစားနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
၅) Munich (2005)
ဒီဇာတ်ကားဟာ Steven Spielberg ရိုက်ကူးထားသမျှ ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ အေးတိအေးစက်နိုင်ပေမယ့် အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားတွေထဲက တစ်ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ် အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာ အစ္စရေးအားကစားအသင်း လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ပြန်လည်လက်စားချေတဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်လို့ အရမ်းကို ကြည့်ကောင်းပါတယ်။
၄) Jaws (1975)
ဒီဇာတ်ကားကတော့ ငါးမန်းတွေ တိုက်ခိုက်မှုကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားကို ကြိုက်သူတွေက တကယ့်ဂန္တဝင်ဇာတ်ကားလို့ သတ်မှတ်ထားတာပါ။ စက်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ငါးမန်းတွေက စိတ်ကူးထားတဲ့အတိုင်း ပုံမပေါ်လာတာတောင်မှ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့လို့ ဂန္တဝင်တွင်ခဲ့ပါတယ်။
၃) Saving Private Ryan (1998)
မင်းသားကြီး Tom Hanks ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားဟာ အဖွင့်ဇာတ်ဝင်ခန်းကစလို့ နောက်ဆုံးခန်းအထိ ဆွဲဆောင်နိုင်လွန်းတဲ့ ဇာတ်ကားပါ။ ဒီဇာတ်ကားနဲ့ Steven Spielberg ဟာ အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆုကို ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ရယူနိုင်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၂) E.T. (1982)
ဒီဇာတ်ကားကတော့ တခြားကမ္ဘာက လာလည်တဲ့ ဂြိုဟ်သားလေး ET နဲ့ ကမ္ဘာမြေပေါ်က ကလေးမလေးနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်ပြီး ကြည်နူးဖွယ်ကြေကွဲဖွယ် ဇာတ်လမ်းလေးမှန်းကြည့်ဖူးသူတိုင်း သိမှာပါ။ ဒီဇာတ်ကားဟာလည်း Steven Spielberg ရဲ့ ဂန္တဝင်လက်ရာကောင်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၁) Schindler’s List (1993)
ဒီဇာတ်ကားဟာ သူ့ကိုယ်သူ အကောင်းဆုံးပြန်မွမ်းမံတင်ဆက်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားကို ချဉ်းကပ်ပုံက အရင်နဲ့ ကွာပါတယ်။ Schindler နေရာက သရုပ်ဆောင်တဲ့ Liam Neeson ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ကွက်တွေနဲ့ အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားဆု၊ အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆုအပါအဝင် အကယ်ဒမီ ၇ ဆုဆွတ်ခူးအောင် လုပ်ဆောင်နိင်ခဲ့တဲ့ Steven Spielberg ရဲ့ အကောင်းဆုံးလက်ရာတစ်ခုပါပဲ။
Ref : cinemaholic.com
ဒါရိုကျတာ Steven Spielberg ရိုကျကူးထားသမြှ အကောငျးဆုံးဇာတျကား (၉) ကား
ရုပျရှငျလေးမြား ကွညျ့လို့ ရုပျရှငျပါးဝလာပွီဆိုရငျ မငျးသား မငျးသမီးရှေးရုံတငျမဟုတျဘဲ ဒါရိုကျတာကိုပါ ရှေးခယျြလာကွပါပွီ။ ဒါရိုကျတာ Steven Spielberg ဆိုရငျတော့ ဒီဇာတျကားဟာ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတဈကား၊ ကွညျ့ရမယျ့ ဇာတျကားလို့ စိတျထဲ ခကျြခငျြးကွညျ့ခငျြသှားတာမြိုး ဖွဈပါတယျ။ Steven Spielberg ရဲ့ အရညျအခငျြးဟာ ရုပျရှငျဇာတျကားတဈကားကို စိတျခံစားခကျြရော၊ ကွီးကယျြခမျးနားမှုရော ခံစားရအောငျ ရိုကျတတျသူဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သူရိုကျသမြှ ဇာတျကားတှထေဲက အကောငျးဆုံး ဇာတျကား(၁၀) ကားကို ညှနျးဆိုဝမြှေလိုကျပါတယျ။
နာမညျကြျောမငျးသား Tom Cruise ပါဝငျထားတဲ့ ဒီ Sci-fi ဇာတျကားဟာ အကောငျးဆုံးသရုပျဆောငျခကျြတှနေဲ့ ၂၀၀၂ ခုနှဈရဲ့အကောငျးဆုံးဇာတျကားတှထေဲက တဈခုလို့ ပွောနိုငျပါတယျ။
ဒီဇာတျကားကတော့ Spielberg ရဲ့ ရုပျရှငျသကျတမျးတလြှောကျ စိနျချေါမှုအရှိဆုံးဇာတျကားတှထေဲက တဈကားဖွဈပါတယျ။ သူဟာ သူ့သူငယျခငျြး ဒါရိုကျတာ Stanley Kubrick ဆီက ဒီဇာတျကားကို လကျလှဲပွောငျးယူရိုကျကူးခဲ့တဲ့အခါမှာလညျး ဝငျငှေ ဒျေါလာ ၂၃၅.၉ သနျးနဲ့ ဝငျငှကေောငျးသလို အကယျဒမီဆု ၂ဆုအတှကျ ဆနျကာတငျစာရငျးဝငျတဲ့အထိလညျး အောငျမွငျခဲ့ပါတယျ။
ဒီဇာတျကားတော့ သမိုငျးဆိုငျရာအခကျြအလကျတှနှေယျပွီး ရိုကျကူးထားတဲ့ ဒရာမာဇာတျကား အမြိုးအစားဖွဈပွီး Daniel Day-Lewis က သမ်မတကွီး လငျကှနျးနရောက သရုပျဆောငျထားပါတယျ။ သမ်မတကွီးလငျကှနျးမသဆေုံးခငျ နောကျဆုံး ၂လမှာ လငျကှနျးကွုံရတဲ့ အခကျအခဲနဲ့ ရငျဆိုငျဖွရှေငျးရပုံတှကေို ရိုကျကူးတငျဆကျထားပါတယျ။ ဒီဇာတျကားဟာ အကယျဒမီ ၁၂ ဆုအတှကျ ဆနျကာတငျစာရငျးဝငျခဲ့ပွီး Best Production Design နဲ့ Day-Lewis ကလညျး အကောငျးဆုံးသရုပျဆောငျဆုရပါတယျ။
ဒီဇာတျကားကတော့ Steven Spielberg ရိုကျကူးသမြှဇာတျကားထဲမှာ Box Office ဝငျငှနေညျးတဲ့ ဇာတျကားထဲမှာ ပါပါတယျ။ ဒုတိယကမ်ဘာစဈအတှငျးက အကဉျြးကခြံရတဲ့ ကလေးတဈယောကျရဲ့ အတှအေ့ကွုံကို ရိုကျကူးထားတဲ့ ဇာတျကားဟာ တကယျ့ကို အငျအားကောငျးပွီး ညှို့ယူဖမျးစားနိုငျတဲ့ ဇာတျကားဖွဈပါတယျ။
ဒီဇာတျကားဟာ Steven Spielberg ရိုကျကူးထားသမြှ ဇာတျကားတှထေဲမှာ အေးတိအေးစကျနိုငျပမေယျ့ အကောငျးဆုံးဇာတျကားတှထေဲက တဈကားလညျး ဖွဈပါတယျ။ ၁၉၇၂ ခုနှဈ အိုလံပဈပွိုငျပှဲမှာ အစ်စရေးအားကစားအသငျး လုပျကွံသတျဖွတျခံရပွီးနောကျပိုငျးမှာ ပွနျလညျလကျစားခတြေဲ့ ဇာတျလမျးဖွဈလို့ အရမျးကို ကွညျ့ကောငျးပါတယျ။
ဒီဇာတျကားကတော့ ငါးမနျးတှေ တိုကျခိုကျမှုကို ရိုကျကူးထားတဲ့ ဇာတျကားကို ကွိုကျသူတှကေ တကယျ့ဂန်တဝငျဇာတျကားလို့ သတျမှတျထားတာပါ။ စကျနဲ့ လုပျထားတဲ့ ငါးမနျးတှကေ စိတျကူးထားတဲ့အတိုငျး ပုံမပျေါလာတာတောငျမှ အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ ရိုကျကူးနိုငျခဲ့လို့ ဂန်တဝငျတှငျခဲ့ပါတယျ။
မငျးသားကွီး Tom Hanks ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ ဒီဇာတျကားဟာ အဖှငျ့ဇာတျဝငျခနျးကစလို့ နောကျဆုံးခနျးအထိ ဆှဲဆောငျနိုငျလှနျးတဲ့ ဇာတျကားပါ။ ဒီဇာတျကားနဲ့ Steven Spielberg ဟာ အကောငျးဆုံးဒါရိုကျတာဆုကို ဒုတိယအကွိမျမွောကျရယူနိုငျခဲ့တာလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဒီဇာတျကားကတော့ တခွားကမ်ဘာက လာလညျတဲ့ ဂွိုဟျသားလေး ET နဲ့ ကမ်ဘာမွပေျေါက ကလေးမလေးနဲ့ သူငယျခငျြးတှေ ဖွဈပွီး ကွညျနူးဖှယျကွကှေဲဖှယျ ဇာတျလမျးလေးမှနျးကွညျ့ဖူးသူတိုငျး သိမှာပါ။ ဒီဇာတျကားဟာလညျး Steven Spielberg ရဲ့ ဂန်တဝငျလကျရာကောငျးတှထေဲက တဈခုဖွဈပါတယျ။
ဒီဇာတျကားဟာ သူ့ကိုယျသူ အကောငျးဆုံးပွနျမှမျးမံတငျဆကျထားတဲ့ ဇာတျကားဖွဈပွီး ရုပျရှငျဇာတျကားတဈကားကို ခဉျြးကပျပုံက အရငျနဲ့ ကှာပါတယျ။ Schindler နရောက သရုပျဆောငျတဲ့ Liam Neeson ရဲ့ သရုပျဆောငျကှကျတှနေဲ့ အကောငျးဆုံးဇာတျကားဆု၊ အကောငျးဆုံးဒါရိုကျတာဆုအပါအဝငျ အကယျဒမီ ၇ ဆုဆှတျခူးအောငျ လုပျဆောငျနိငျခဲ့တဲ့ Steven Spielberg ရဲ့ အကောငျးဆုံးလကျရာတဈခုပါပဲ။